Kutheni le nto iinqwelomoya zase-Ethiopia zifuna ukuba iZambia ibe yindawo elandelayo yokuhamba kunye nokhenketho e-Afrika?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Kutheni le nto iinqwelomoya zase-Ethiopia zifuna ukuba iZambia ibe yindawo elandelayo yokuhamba kunye nokhenketho e-Afrika?
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase-Ethiopia eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • abantu • Technology • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseZambia eziQhekezayo
Agasti 22, 2018
Utyalo-mali olutsha kunye nentsebenziswano phakathi kwe-Star Alliance Carrier Ethiopian Airlines kunye ne-Zambia Airways ingatshintsha indlela i-Aviation e-Afrika eza kuphuhla ngayo. Isivumelwano se-Ths sinamandla okuba iZambia ibe yindawo entsha yokuhamba nokhenketho kunye nezothutho kwilizwekazi lase-Afrika.
Namhlanje zombini ezi nkampani zikhuphe ingxelo edibeneyo. Le ngxelo ifundeka ngolu hlobo
Thina, iGosa eliyiNtloko eliLawulayo leQela loPhuhliso lwamaShishini (i-IDC), uMnu Mateyo C. Kaluba, kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba le-Ethiopian Airlines (ET), uMnu Tewolde GebreMariam, sibambe umsitho wokutyikitya ngomhla we-19 Agasti 2018 ILusaka ukuphawula isivumelwano sethu njengabanini zabelo kwiZambia Airways.
Njengamahlakani alinganayo okulingana kwiprojekthi yenqwelomoya yenqwelomoya yaseZambia, i-IDC iyakubamba ukulingana kweepesenti ezingama-55 kumphathi, kunye nee-Airlines zase-Ethiopia zibambe iipesenti ezingama-45. Utyalo-mali lokuqala njengoko siqala umphathi wesizwe uya kuba yi-US $ 30 yezigidi. Ngokucacileyo, njengokuba sisebenza kwi-airline, siya kuququzelela ukuxhaswa ngemali okuyimfuneko ukuxhasa ukukhula kwayo. Kulindelwe ukuba inqwelomoya entsha izakusebenzisa iinqwelomoya ezili-12 kwaye ibithwale abagibeli abangaphezulu kwesigidi esi-1.9 ngowama-2028.
Njengabanini zabelo, sinombono ocacileyo wesikhokelo ekufuneka sisithathile ukuze siqinisekise ithamsanqa kunye nokukhula okukhuselekileyo kwenqwelo moya yeli. Siza kumilisela inkcubeko eqhutywa ngokwenziwa kwemibutho yolawulo olomeleleyo kwaye senze iZambia Airways isebenze kwezorhwebo.
IZambia Airways izakuphehlelela iindlela zalapha nezengingqi ngelixa iindlela zamazwekazi kubandakanya iYurophu, uMbindi Mpuma, kunye neAsia ziya kongezwa kungekudala.
Kwiinqwelo-moya zase-Ethiopia olu tyalo-mali luyahambelana noMgaqo-nkqubo wethu we-2025 Multiple Hubs Strategy e-Afrika. Njengenqwelo moya yendalo yemveli kunye nenene yaseAfrika, sikholelwa ekubeni abathwali beAfrika bazakufumana kuphela isabelo esifanelekileyo kushishino lokuhamba ngenqwelomoya kunye nentengiso yaseAfrika ngentsebenziswano nabanye abathwali beAfrika.
Kwi-IDC olu tyalo-mali lubonisa ukuzibophelela kwethu ekwandiseni nasekomelezeni ushishino lwaseZambia. Ukusekwa kwenqwelomoya yenqwelomoya kuya kukhuthaza ukukhula kwicandelo lezokhenketho kwaye kuya kuba nefuthe eliphindaphindayo ekudalweni kwemisebenzi ngamashishini ahlukeneyo kwivenkile yokubonelela ngenqwelomoya efana neehotele, iivenkile zokutyela, iiarhente zokuhamba, umpapashi kunye nabanye.
Ngenzame kaRhulumente waseZambia yokwakha izibonelelo zothutho ezivela kwizikhululo zeenqwelo moya ezintsha, iindlela ezilungileyo zendlela, kwaye ngoku nenqwelomoya, siqinisekile ukuba iZambia imiselwe ukuba ibe yindawo yokuhamba ngenqwelomoya kunye neendawo zokuhamba.
Sijonge ukukhulisa obu budlelwane ukusuka ekomeleleni nasekuboneni iZambia Airways inyukela esibhakabhakeni kulo nyaka.